प्रहरीबाट भागेको चोरलाई प्रहरीले नै गर्यो उद्धार , हेर्नुस् भाइरल भिडियो
Media NPप्रकाशित मिति: बुधबार, चैत २७, २०७५१३:०७
काठमाडौ । चीनको हुनान प्रान्तको जियांगमा प्रहरीबाट भागेको चोेरलाई प्रहरीले नै उद्धार गरेको छ । प्रहरी चोरलाई पक्राउ गर्न उनी बसेको भवनमा पुगेपछि डरले भाग्ने क्रममा भवनको २२ औ तल्लामा अड्किएका थिए ।त्यसपछि ती युवकले
आफ्नो पूर्वप्रेमीले अर्कै युवतीसँग बिहे गर्न लाग्दा बनेर आइन् पूर्वप्रेमिका नै बेहुली ! सबै दंग, (भिडियो)
Media NPप्रकाशित मिति: बुधबार, चैत २७, २०७५१०:३६
काठमाडौ । प्रत्येक युवायुवतीको लागी पहिलो माया एकदमै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यो माया मतिष्कले होइन् पुरै मन देखि नै गरिएको हुन्छ । तर यदि त्यही माया छुट्यो भने प्रेममा ठुलो आधीवेहेरी आउँछ । आज हामी
भाइरल भिडियो: नन्दले भाउजुलाई निर्मम तरिकाले लात्तीले हान्दै कालो मोसो दलेर कपाल समेत काटिदिइन् !
Media NPप्रकाशित मिति: आइतबार, चैत २४, २०७५१५:४४
काठमाडौ । बेलाबेलामा सामाजिक सञ्जालमा केही अनौठो भिडियोहरु भाइरल हुने गर्दछन् । जसले सामान्य घटनालाई पनि एकाएक चर्चामा ल्याउछन् । हाल त्यस्तै एक माइती आएकी नन्दले भाउजुलाई निर्घात लात्तीले कुट्दै गरेको भिडियो भाइरल भएको छ
नेपाल सल्यानका १५ बर्षीय बाल वैज्ञानिक विजयले बनाए ,४ जना अटाउने यस्तो जहाज (भिडियो)
Media NPप्रकाशित मिति: बिहिबार, चैत २१, २०७५१५:३९
काठमाडौ । सल्यानको मेलघारीस्थित एक १५ बर्षीय बालकले ४ जना अटाउने जहाज बनाएका छन् । हाल कक्षा ९ मा पढदै गरेका बालकले सूरुवात फिरफिरेबाट गरेका थिए । उनीको नाम विजय राणा हो । उनको जन्म
यसरी बनाउनुस् घरमै स्वादिष्ट धनियाँ र पुदिनाको अचार (विधिसहित)
Media NPप्रकाशित मिति: बिहिबार, चैत २१, २०७५११:४३
काठमाडौ । हाम्रो गाँउघर वरपर सजिलै पाइने धनियाँ र पुदिना हाम्रो स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायक हुन्छ । भान्सामा अचार बनाइने धनियाँ र पुदिनामा विभिन्न औषधीय गुणहरु पनि हुन्छ । यो प्राय तराई र पहाडी क्षेत्रमा
यी घरेलु तरिका केसर र दुधले यसरी चम्काउनुस् आफ्नो अनुहार (विधिसहित)
Media NPप्रकाशित मिति: मङ्गलबार, चैत १९, २०७५११:४१
काठमाडौ । सबैको चाहाना आफ्नो अनुहार सुन्दर, चम्किलो र आकर्षक होस् भन्ने नै हुन्छ । त्यसका लागि मानिसले धेरै समय र पैसा खर्च गरेर राम्रो बनाउने प्रयास पनि गरिरहेका हुन्छन् । त्यसोभए अब सजिलो, सुलभ
पहिलो प्रश्नमै लाईफलाईन लिने यी महिलाले “को बन्छ करोडपति”मा कसरी जितिन् यति धेरै रकम ? (भिडियो)
Media NPप्रकाशित मिति: आइतबार, चैत १७, २०७५१४:३७
काठमाडौँ ।ब्रिटेनको चर्तित टेलिभिजन सो “हु वान्टस् टु वि ए मिलिनियर”को नेपाली संस्करण “को बन्छ करोडपति” नेपालमा प्रसारण भएर अहिले २३ एपिसोडमा पुगेको छ । महानायक राजेश हमालले सञ्चालन गर्ने यस सो शनिवार , आइतबार
पूर्वप्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा खटिएको सशस्त्रको गाडीले स्कुटरलाई ठक्कर दिएर फरार (भिडियो )
Media NPप्रकाशित मिति: आइतबार, चैत १७, २०७५१२:२३
काठमाडौ । बबरमहलस्थित पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दको सुरक्षामा खटिएको सशस्त्र प्रहरी बलको गाडी एक स्कुटरलाई ठक्कर दिएर फरार भएको छ । जिकज्याक तरिकाले चलाएको भ्यानले सशस्त्र प्रहरी बलको बा १ झ ९५२७ को गाडीले एक
यसरी बनाउनुस् घरमै मिठो गोलभेडाको चट्नी (भिडियो)
Media NPप्रकाशित मिति: आइतबार, चैत १७, २०७५११:२७
काठमाडौ । हामी दैनिक जीवनमा तरकारीको स्वाद बढाउन होस् वा सलाद र अचारको लागी गोलभेडाको प्रयोग गछौ । यसमा भिटामिन सी, बिटाक्यारोटिन, लाइकोपिन, भिटामिन ए र पोटाशियमको प्रचुर मात्रा पाइन्छ । त्यसैले गोलभेडाको गर्मी मौसममा